Xaaladihii Ugu Dambeeyay Ee Degmada Jalalaqsi. – Calamada.com
Xaaladihii Ugu Dambeeyay Ee Degmada Jalalaqsi.
calamada July 20, 2016 1 min read
Saacadihii lasoo dhaafay waxaa gudaha degmada Jalalaqsi ee gobalka Hiiraan ka dhacday israsaaseyn dhexmartay ciidamada Ridada Jabuuti iyo askari ka tirsan dowlada Ridada federaalka.
Israsaaseynta ayaa timid kadib markii ciidamada Jabuuti isku dayeen iney hubka ka dhigaan askariga ka tirsan maleeshiyaatka maamulka Ridada ugu magacaaban degamda Jalalaqsi kaasi oo ay is aflagaadeeyeen sarkaal Jabuutiyaan ah.
Askarigan ka tirsan dowlada Ridada federaalka oo magaciisa lagu soo gaabiyay Buurweyn ayaa rasaas ooda kaga qaaday askaritii Murtadiinta Jabuuti ee doonayay iney hubka ka dhigaan’waxa uu dhaawacay askari Jabuutiyaan ah oo garbaha ay rasaasta ka haleeshay.
Ciidamada Jabuuti ayaa iyaguna sidoo kale waxey rasaas ooda kaga qaadeen askariga ka tirsan dowlada federaalka taasi oo sababtay in isla goobta uu ku geeriyooda askarigaasi.
Qaar ka mid ah ganacsatada iyo shacabka ku dhaqan xaafadaha dhanka Galbeed ee degmada Jalalaqsi oo ku beel ah askariga la dilay ayaa isugu soo baxay wadooyinka degmada iyagoona dhigay dibad bax ay kaga soo horjeedaan ciidamada Ridada Jabuuti.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya inuu jira askari kale oo Jabuutiyaan ah kaasi oo ku dhintay israsaaseynta’iyadoona maanta inta badan ay hakad ku jiraan dhaqdhaqaaqii dadka iyo ganacsiga ee xaafadaha dhanka Galbeed ee degmadaasi.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 15-10-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 15-10-1437 Hijri.